Fitsinjarazaràna Avy Any Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2018 7:15 GMT
Etsy andaniny, ny filoha Ogandey Yoweri Museveni nandeha tselika tany Juba mba handray anjara amin'ireo fifampiresahana momba ny fandriampahalemana. Misalasala ilay ogandey blaogera, Ngorom, momba ny fandraisana anjara ataon'ny Filohampirenena.
Raha mandinika ny tombontsoa iraisam-pirenena ao Sodana manontolo, nanao asa tsy dia misy idirany loatra amin'ireo fifampiresahana momba ny fandriampahalemana efa an-dalana ao Juba i Museveni. Ilay fihaonany tamin'ny delegasiona avy amin'ny LRA sy ny fandevileveny an'ireo ary ny fanararaotana tsotra izao dia midika fa ny tanjony voalohany dia tsy fifandresen-dahatra hisian'ny fandriampahalemana velively. Eo ampitadiavana “bokotra ho tsindriana” i Museveni mba hanilihana an'ireo hamelezana ireo fifanakalozankevitra sy hanatrarany ireo tanjony ao Sodana Atsimo.
Mandritra izany fotoana izany, taterin'ny In An African Minute ireo adihevitra tao Kampala momba ny fandriampahalemana maharitra sy ny fampihavanana. Manamarika izy fa navelan'ny Governemanta sy ny fiarahamonina sivily tsys hisy valiny ireo olana manan-danja ireo.
(i) misy ve finiavana politika hanao izay tena hampisy marina ny fahamarinana sy ny fampihavanam-pirenena ? Miankina amin'i Museveni irery ny valiny. Misy antony tokony hanantenana. Ny lova ho avelany no mahaliana azy hatrany hatrany, indrindra fa ireo mifandraika amin'ny tsy fivakisan'i Afrika Atsinanana. Saingy tokony ho fantany fa tsy ho tongatonga ho azy izany raha tsy milamina aloha ny ao antokantranony. Ao koa ireo antony ara-toekarena. Ny Filaminan'i Sodàna Atsimo, izay i Juba no renivohitra dia mitondra fahafahana ara-toekarena goavana. Izay rehetra mandeha ao Juba dia ho tonga mora foana ao antseranan'i Mombasa rehefa mandalo amin'i Kampala sy Gulu. Ho betsaka ny tombontsoa very ao Oganda raha toa tsy milamina ny ao avaratra. Na ireo mpifanandrina ara-politika toa an'i Gulu LC V, Norbert Mao aza, dia niaiky fa nanjary nisokatra kokoa i Museveni amin'ny famahana ny olana ao avaratra. Na izany aza, mila ezaka mahery vaika avy aminy mba hitondra avo ny kolontsaina politikan'ny patriomonialisma amin'ny endriny vaovao izay manenika an'i Ogandà.
(ii) Ho toy inona ny dingana mikasika ny fahamarinana sy ny fampihavanana nasiônaly? Mihoatra ny fetra misy an'ity lahatsoratra ity ireo antsipirihany mikasika an'io drafitra io, nefa ilay dingana dia tokony hevitra roa miavaka tsara no hampifandanja azy. Voalohany indrindra, tokony hahalala ireo antoko rehetra fa ny dingana mikasika ny “fanekena” dia tena zavadehibe ivon'ny hevitry ny lalàna Ogandey. Nefa ny fitsaràna mpanasazy dia ho asa sisyphisienne nomen-danja tamin'ireo fifanoherana ara-tafika roa amby roapolo tao anatin'ireo taona roapolo farany, handray anjara betsaka amin'ny fampihavanana ny faneken'ny vahoaka an'ireo hadisoana. Faharoa manaraka izany, ny fotokevitra “fanadinoana sosialy“, an'i Rosiland Shaw. Antrôpôlôjista ao amin'ny Anjerimanontolo Tufts, mpahay momba ny olombelona i Shaw, izay ny asany tao Sierra Leone dia mampiseho fa ireo kaomisônan'ny fahamarinana, izay fenitra iraisam-pirenena amin'ny lafiny fitsaràna tetezamita, dia tsy fanasitranana velively. Nasehon'i Shaw fa ireo fomba fijery ara-pivavahana na araka ny nentindrazana mba hitantanana ny lasa no matetika mifanaraka kokoa sy mahomby.
Ao Kampala, nanomboka fomba iray fanarahamaso ny fahaterahana, antsoina hoe Moon Beads ny Vehivavy Voalohany, Janet Museveni, tohanan'ny USAID, narafitra mba hanampiana an'ireo vehivavy hanaraka ny fadimbolany izy io ary hisorohany firaisana ara-nofo reheha amin'ny fotoana maha-lonaka azy ireo. Blaogera marobe, anisan'izany i Jackfruity, no nanakiana an'io programa miteraka adihevitra be io.
Na dia eken'ny drafitr'i Ramatoa Museveni aza ny filàna fandrindrana ny fiainam-pianakaviana tsara indrindra ao Oganda, tena diso be io. Ny fomba iray fandrindrana fiterahana natoraly dia natokana ho an'ireo tsy manana afa-tsy vaddy tokana ary mitaky amin'ireo vehivavy mba hanaraka maso fatratra ireo fadimbolany mandritra ny telo ka hatramin'ny enina volana mialoha ny hametrahana amin'ny toerany ny fitaovana (natao ho azo ampiasaina avy hatrany ireo Moon Beads, ary tsy mety amin'ireo fadimbolana miovaova). Na dia amin'io tranga io aza, eo amin'ny 75-90% ny mampahomby ilay fomba, raha 95-99% ho an'ireo fanabeazana aizana atelina am-bava ary 86-98% kosa ho an'ireo kapôty.
Tao anaty lahatsoratra iray hafa, manome topimaso iray i Jackfruity mikasika an'i Aga Khan, ilay lehilahy iray, izay miely manerana an'i Kampala amin'ny fomba mahagaga ny sariny noho ny an'ny Filohampirenena Museveni:
Ny mikasika an'i Ogandà sy ny hoe nahoana ny endrik'i Aggie no mitsiky amiko eny amin'izay rehetra alehako, dia fanontaniana tsy ahitana valiny foana. Safidiko ny hijery azy ho toy ny ZokiLahy Be mpiahy, manantena fa na inona na inona hitranga – raha midona amina loza ara-boajanahary goavana aza aho, na ny tenako mila efitrano raitra misanda 2500 dolara/isakalina ao Mombasa – ho eo anilako i Aga Khan, manampy ahy am-pifaliana mba hanova ny tontolo ho tsara kokoa.